Calaacalka Maraykanka ee Iiraan oo la ogaadey kadib duqeyntii dhaxalgalka ahayd ee Sucuudiga - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Calaacalka Maraykanka ee Iiraan oo la ogaadey kadib duqeyntii dhaxalgalka ahayd ee Sucuudiga
Kadib duqeyntii dhaxalgalka ahayd ee dawlada Yaman ee taagta daran ku qaadey warshadaha saliida sifeeya ee Sucuudiga, halkaasna ay ku basbeeleen intii ugu badneyd ayaa Maraykanku markiiba ku eedeyay Iiraan.
”Gantaalku wuxuu ka yimi Woqooyiga ama Bariga ee kama iman Koofurta oo Yaman ka xigto ayuu yiri wasiirka arimaha dibedda. Ma soo bandhigin cadayn aan ka ahayn dayaxgacmeed dusha ka sawirey saliida holcaysa ee Sucuudiga o dadka badankiisu la yaabeen.
Waxa taas ka sii daran wuxuu xagjir Taram sheegay in uu ka sugayo wahaabiyada Sucuudiga cida ay u malaynayaan inay weerarka soo qaaday iyo weliba inay u hagto waxa xiga.
Taas oo u muuqata inuu rabo inuu yiraa waxa na wada Sucuudiga waa hadduuba isku qaado inuu weerar ku qaado Iiraan. Wahaabiyada Sucuudiga oo baqdin ku jirto ayaa ka aamustey inay cidna eedayso keliyana sheegtay inuu yahay weerar argagixiso.
Wahaabiyada Sucuudiga oo caqiiqada qaldan ee iyaga u gaarka ah ku faafisa dunida Muslimka ah ayaa ah dawlada sadexaad ee aduunka ugu hub iibsi badan ama lacag badan geliya dhinaca hubka, waxayna balaayiin doolar oo huba iyo weliba heshiis ilaalina kula jirtaa Maraykanka.
Weerarka lagu gubey hantidii ay hubka ku soo iibsan jirtey ayaa waxaas oo dhan ka dhigey qasaare.
Nin joogey xarunta la gubey ayaa sheegay in hubkaas dhamaantood gacanta ugu jiraan Maraykanka oo Sucuudiyiintu xataa kaxayn Karin, in la hago mooyee. Halkanse meel laga filaayay maaha oo maba oolin raadaaro iyo wax kale.
Wixii oo huba ayaa shaqayn waayay xataa kuwa sheega diyaaradaha dalka soo galaya waana halka xagjir Taram ka gubanayo ee uu leeyahay eeda waxa iska leh Iiraan ee malaha dawlada Yaman ee Xuutiyiintu gar-wadeenka ka yihiin.
Taas oo ka dhigan waxa weerarka soo qaaday wadan awood u leh oo ina dili kara ee maaha Xuutiyiinta aan eryan karno.
Saliida Sucuudiga ayaa doolar lagu gataa taas oo Sharaf u yeeshay doolarka Maraykanka aduunka oo dhan waayo waxa la is dhaafsanayaa malaayiin doolar maalin kasta.
Ujeedada guud ayaa ah maxaa naga galay hadday saliidu gubato taayada ayaa suuq fiican helaysa, wuxuuna Taram markiiba sheegay in ay diyaar u yihiin inay difaacaan Sucuudiga oo macnaheedu yahay inay hub kale sii gataan.
Waqtiguse wuxuu sheegayaa in Xuutiyiinta fiqiirka ah sii xoogeysanayaan oo awoodoodu gaartey meel halis gelisay saliidii lagu weerari jirey ee hubka lagu soo iibsan jirey haddase yaa ka celin.